इटहरीलाई आधुनिक नमुना नगरपालिका बनाऔं
२०२७÷०२८ सालदेखि नै इलामबाट धरान, विराटनगर र काठमाडौं आवतजावत गर्दा मैले इटहरी पार गरेर जाने आउने गर्नुपथ्र्यो । इटहरी चोकमा महेश्वर सुब्बाको एउटा काठको घर थियो । छेउमा ससना टिनका छाप्राहरू थिए । हाल उपमहानगरपालिका कार्यालय रहेको ठाउँमा सानो पोखरी र रुखहरू थिए ।
हेर्दाहेर्दै आज इटहरीको रूप बदलिएको छ । देशमा गणतान्त्रिक व्यवस्था आएको छ । ३ तहका सरकार निर्माण भएका छन् । अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार पनि बनेको छ । तालतलैया, बुढासुब्बा, पञ्चकन्या, वराहक्षेत्र र भेडेटारजस्ता धार्मिक र पर्यटकीय स्थलहरू इटहरीको शिरमा रहेका छन् । सङ्गीतको क्षेत्रमा सङ्गीत साधना प्रतिष्ठान रहेको छ ।
के छैन इटहरीमा ? अब इटहरीलाई के कस्तो बनाउने ? इटहरी क्षेत्रमा विभिन्न विज्ञ महानुभावहरू, प्रशासक, इञ्जिनियर, प्रोफेसर लगायत अनेकौं विद्वानहरू हुनुहुन्छ होला ? इटहरीलाई कस्तो शहर बनाउने सबैले आ–आफ्नो दृष्टिकोण राख्न सक्नुपर्ने बेला भएको छ ।
यसै सन्दर्भमा डेनमार्कका अञ्जा उर्ज प्रोफेसरले भनेको कुरा सम्झिन्छु । उनी भन्थे, एउटै टोलका मान्छे एउटै कार्यालयमा काम गर्दा आधा घण्टाको कफी बे्रकमा १५ मिनेट चाहिँ आफ्नो टोललाई अझ कसरी विकास गर्ने भन्नेबारे छलफल गर्दछन् रे । अनि पो देश विकास हुन्छ । हाम्रोमा त्यस्तो सामुहिक रूपले केही गरौँ न भन्ने भावना नै छैन । बरु कति सकिन्छ अरुको उछितो काट्ने योजना पो बनिरहेको देखिन्छ, सुनिन्छ र हुने गरेको पाइन्छ ।
स्थानीय सरकारका मेयर, उप–मेयर र अन्य पदाधिकारीहरू सबैको नगरको सम्पूर्ण पूर्वाधार विकास निर्माणको जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व त हुँदै हो तर यसो गर्दा कसो होला भन्ने आफ्नो दृष्टिकोण त राख्न सक्छौं नि ? त्यसो गरे समग्र इटहरीको विकास नहोला ? सौन्दर्य नबढ्ला ? व्यापार नबढ्ला ? जे पनि नगरपालिकाले गर्ने हो भन्ने मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ ।
आफ्नो स्वार्थमा बाधा पुग्दामात्र नगरपालिका घेर्ने वा गेटमा गएर भाषण गर्ने र आधारहीन आलोचना गर्ने बानी अब हटाऔं । इटहरीको समग्र विकास भनेको कुनै एउटा राजनीतिक दलको मात्र होइन । सम्पूर्ण जनताको लागि र इटहरीको भविष्यका लागि हो भन्ने कुरा महसुस गरौं ।
सडक फराकिलो हुनु सरकारमा भएको दलको मात्र होइन त्यो विकासको मेरुदण्ड हो । एउटा राम्रो अस्पताल र विशेषज्ञ डाक्टरहरू भएको अस्पताल इटहरीको आवश्यकता हो । त्यसो हुन सके पूर्वी पहाडका बिरामीहरू धरान, विराटनगर र सिलिगुडी दौडाउनुपर्ने थिएन । यसतर्फ समयमा नै सोचेर लगानीी गर्दा लगानी खेर जाने छैन । होटल लजहरू पनि चलिरहेका मात्र छन् । गुणस्तरीय छैनन् । यसतर्फ पनि होटल लजहरूको स्तर उकास्ने काममा सञ्चालकहरूको ध्यान पुगोस् ।
चोकमा ट्राफिक व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? सडकमा पसल राख्नेहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? बसपार्कलाई अझ व्यवस्थित र आधुनिक किसिमले विकसित देशमा चलाएझैँ गरी चलाउँदा बसपार्कको सौन्दर्य पनि बढ्ने छ ।
जुनसुकै शहरको आधुनिक विकासका लागि पहिलो शर्त भनेको सौन्दर्य हो । यसको आधुनिकीकरण र दीर्घ व्यवस्थापन नै त्यस क्षेत्रका मानिसहरूको सभ्यताको परिचय हो । शहर सफा गर्ने कुरा मानिसका मनहरूको सफाइ गर्नु पनि हो । आफ्नो घरको फोहोर बाटोमा र सडकमा फाल्नु फोहोर व्यवस्थापन होइन । शहर सफा हुनु आफैँ सफा भएसरह मानेर फोहोर व्यवस्थापनमा विशेष निगरानी बढाउनु र निश्चित स्थानमा मात्र फोहोर व्यवस्थापन गर्नु नागरिकको कर्र्तव्य पनि हो भन्ने कुरा कसरी सबैलाई बुझाउन सकिन्छ होला ?
सकारात्मक सोचले इटहरीलाई सफा, सुन्दर र हरियाली शहरको रूपमा कल्पना गरेर प्रयास गरौँ न । शहर किन बन्दैन ? सकारात्मक सोचको धारणाले इटहरीका सबै क्षेत्रको विकासमा सम्भावना बोकेको छ । व्यापार बढ्छ । मानिसको आवागमन बढ्छ । लगानीका क्षेत्रहरू विकसित हुन्छन् । इटहरी बाहिरका लगानीकर्ताहरूलाई इटहरीमा लगानी गर्ने इच्छाशक्ति मौलाउँछ ।
सिंगापुर कसरी बन्यो ? पहिले कस्तो थियो र किन सिंगापुर आज हरेक क्षेत्रमा विश्वमा नै चर्चित छ भन्ने बुझ्न सिंगापुरका स्व. प्रधानमन्त्री लिक क्वानयुको पुस्तक पढौं । सबै मिली नगरप्रमुखउप–प्रमुखलाई पूर्वाधार विकासका काम गर्न प्रेरीत र प्रोत्साहित गरौँ । यो ५ वर्षको अवधिमा इटहरी आधुनिक इटहरी बन्छ ।
सञ्चारकर्मीले ट्याङ्ग्रा खोलामा बोट चलाउँदा खोलामाथिको पुलमा कफी सपको कल्पना गर्नु सुन्दर र सम्भावनाबोकेको विषय हो । बुढी खोलाको किनारै किनार दुहबी सम्म सडक निर्माणको कल्पना गरौं । सडकको छेउछाउ स–सना पसलहरू चल्छन् । बाटोको दुरी घट्छ । नदी नियन्त्रण भएर हजारौँ बिघा जमिन निस्कन सक्छ । ट्राफिक अस्तव्यस्तता कम हुन्छ । यस्ता विषयहरूमा स्थानीय सरकारले पनि समग्र नगरको विकासको लागि योजना बनाएर प्रस्तावहरू आह्वान गर्न उचित हुन्छ ।
धेरै मानिसहरू व्यक्तिगत जग्गा दलाली गर्न दौडधुप गरेको देखिन्छ । तर केही नयाँ र ‘इनोभेटिभ’ काम गर्नेतर्फ कसैको ध्यान गएको देखिँदैन । चीनका राष्ट्रपति सिजिन पिङले आफ्नो पुस्तक ‘द गभर्नेस अफ चाइना’मा कडा परिश्रम नै सफलताको पथ हो भनेका छन् ।
हामी इटहरीवासी सबै मिली स्थानीय सरकारलाई काम गर्न प्रोत्साहन गरौं । अनावश्यक अड्चन र अवरोध नगरौं । व्यक्तिगत स्वार्थहरू नजोडौं । उसको पालो या मेरो पालोमा भन्ने भावना संस्थागत गरौं । त्यसैगरी स्थानीय सरकारले पनि आफ्ना योजनाहरू पारदर्शी बनाएर अगाडि सारौं । यसरी जुट्यौं भने इटहरी नगरलाई आधुनिक शहर बनाउन सकिँदैन र ?
अबको राजनीति पनि सिद्धान्तको मात्र नभई बीपीले भनेझैँ व्यावहारिक हुनुपर्दछ । स्थानीय सरकारले पनि सबैको भावनालाई समेट्न सक्नु पर्छ । अनि हेरौं ५ वर्षमा इटहरी एउटा नमुना नगरपालिका, आधुनिक शहर र भविष्यनिर्माणको शहर कसरी बन्दैन ?
सबैले प्रण गरौं । सकारात्मक सोच र सामुहिक भावना, विवेक र क्षमताले सहयोग गरौं । नगर प्रमुख र उप–प्रमुखको बाहिरी कारण, आपसी असमझदारीले अन्ततः सम्पूर्ण काममा अवरोध खडा हुँदा ५ वर्षको अवधिमा केही काम गर्न नसके पार्टी र आफ्नो छवि पनि बिग्रन सक्ने सम्भावना रहन्छ । स्वयम् आफ्नो अवस्था पनि राजनीतिकविहीन हुन सक्दछ । यसर्थ उपल्लो तहका नेताहरूले भएका असमझदारीलाई हटाई काम गर्ने उत्साह दिनुपर्छ । चिया पसलमा खासखुस गर्ने, कुरा काट्ने, फेसबुकमा आलोचना लेख्ने कुराले कसैको हित गर्दैन ।
मैले इटहरीको समृद्धि देखेको छु । इटहरीका जननिर्वाचित पदाधिकारीहरू धेरै अवसर बोकेका क्षेत्रमा निर्वाचित बनेका छन् । इटहरी विकासको सम्भावना बोकेको सुगम उपमहानगरपालिका हो । यो शहर पूर्वको द्वार हो ।
इटहरी हुँदै सबै सम्भावनाहरू आवतजावत गर्दछन् त्यसलाई समाउन सक्नु पर्दछ । इटहरीको आधुनिक दीर्घकालीन विकासका लागि आफूभित्रको अहम्तालाई जनहितको लागि त्यागेर हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यसो गर्न सके इटहरी शहरले नेपालकै विकसित र सबै नेपालीहरूले मष्तिकमा राख्ने शहरको रूपमा भविष्य बोकेको छ । प्रदेश नं. २ ले कुरै भए पनि केही गर्ने जमर्काे गर्दै छ । प्रदेश नं. ३ ले १५ वर्षे योजना सार्वजनिक गरिसकेको छ । प्रदेश नं. १ चाहिँ अचल भएर बसेको छ ।
सारांशमा भन्दा विकासका लागि दृष्टिकोणमा प्रष्टता ल्याउन आवश्यक छ । कार्यान्वयन मा दृढ इच्छाशक्तिको खाँचो छ । जिम्मेवारीमा बसेका सबैले आफूलाई इटहरीको विकासका लागि जनताहरूको सम्भावना बोकेको जिम्मेवार पदाधिकारी हुँ भन्ने कुरा बुझ्न सक्नुपर्छ । त्यसो भए मात्र इटहरीको विकास, सम्भावना र समृद्धिलाई सम्भव तुल्याउन सक्छ ।